Umda we-Apple wokuKhanya kweMizobo | IPhone iindaba
Umda we-Apple wokuKhanya kweMifanekiso
UAlvaro Fuentes | | iPhone, iPhone X
Umphuhlisi wase-Ireland uSteven Troughton-Smith uyifumene loo nto Iifoto ezindala ezivela kwimowudi yokuma Ikhamera ye-iPhone okwangoku ayinakuphuculwa kusetyenziswa iziphumo zokukhanya kwezifoto ezitsha yeApple ngaphandle kokukhangela ukujika kwinkqubo yokusebenza.
Ngaba sijamelene nokunye ukuthintelwa kwesoftware ye-Apple? Ukuvavanya ithiyori yakhe, uTroughton-Smith waqala ngokudlulisa ifoto-yemowudi yemifanekiso ethathwe nge-iPhone 7 yakhe kwi-Mac yakhe. Emva koko wenza ezinye Utshintsho kwimethadatha ngokukhawuleza kwifayile Phambi kokuba uyithumele kwi-iPhone X yakhe.Umangalisiwe kukuboniswa kwesibane sePortrait kwimowudi yemifanekiso ebonisa umfanekiso omangalisayo kwi-app yeefoto. Ngamanye amagama, into esithintelayo ekusebenziseni ezo ziphumo zokukhanyisa kwiifoto ebesizithathile ngaphambili ayisiyonto ngaphandle kweseti yemethadatha esinokuthi sizitshintshe yona ngokwethu ukuze "sidenge" inkqubo.
Oku ungazijonga ngokwakho ngawo nawuphi na umfanekiso, mdala okanye mtsha, ukuba nje yathathwa nge-iPhone 7 Plus kusetyenziswa imo yomzobo omdala. Vula usetyenziso lweeFoto, ukhethe enye yemifanekiso yeNdawo yeMifanekiso, kwaye ubetha u-Hlela. Ukuba obu bubunzulu bomfanekiso wentsimi, uya kubona iilebheli emthubi "Portrait" phezulu. Into ongayi kuyibona xa ucofa iqhosha lokuHlela sisixhobo esibonisa ukukhanya kwesibane, nkqu nakwi-iPhone X.
Ngenxa yoko, umsebenzisi ufumanisa ukuba banamathele kwiifoto kwimowudi ye-portrait kwaye ngaphandle kwendlela yokubomeleza ngeziphumo ezitsha zokukhanyisa kwimizobo. Yi le ingakumbi engaqhelekanga Ukwazi ukuba i-Portrait Mode kunye ne-Portrait Lighting images zisebenzisa imephu efanayo yobunzulu. I-Apple ayiqondwa ukwenza lo mahluko. IPhone X ixhasa ubunzulu befoto yasendle zombini kwiikhamera zangaphambili nangasemva. Kwi-iPhone 8 Plus kunye ne-iPhone 7 Plus, iifoto zemowudi yemifanekiso zinokuthathwa kuphela ngekhamera ye-lens ezimbini zangasemva kuba yi-iPhone X kuphela enekhamera yangaphambili ekwaziyo ukubona ubunzulu.
Kodwa inokuba yintoni isizathu salo mda wesoftware yokufakelwa? U-John Gruber we-Fireball onesibindi uthi i-Portrait Lighting ilinganiselwe kwi-iPhone X nakwi-iPhone 8 Plus ngenxa yezizathu zomsebenziNjengoko ezi fowuni ziqhuba i-chip yeBionic A11 yamva nje kunye neprosesa yomfanekiso ophuculweyo we-Apple kunye nolwimi oluzinikeleyo lokufunda ngomatshini.
NgokukaGruber, njengoko kusaziwa ngalo mzuzu, ezi ziphumo azenziwanga kwi-iPhone 7 Plus kuba ukusebenza bekuphantsi kakhulu ngexesha lokubanjwa. Ngokwenene Ifuna i-chip ye-A11 Bionic ukuze isebenze kakuhle phila ngekhamera kwaye iApple igqibe ekubeni ingayifaki njengenqaku le-iPhone 7 Plus kuba inike imvakalelo ngakumbi kwento ebibandakanyiwe ngaphandle kokuyigqibezela ngokupheleleyo kwaye ngaphandle kokufezekisa ukusebenza ngokugqibeleleyo; njengesiqingatha senqaku.
Ithiyori kukuba ukujonga kwangaphambili izibane zePortrait Lighting ngaphambi kokuba inkqubo yokubamba ibeke intsebenzo ngaphezulu kwi-CPU / GPU engaphaya kwento enokuxhaswa yi-A10 Fusion chip kwi-iPhone 7 Plus. Kulula ukukuqonda ukubaluleka kokujonga kuqala xa uyisebenzisa ngalo mzuzu, kodwa akukho sizathu sokuba i-iOS akufuneki ihlaziye zonke iifoto zendlela yePortrait kwilayibrari yethu ukuze sibaphucule ngeziphumo zokukhanya nkqo. Le ngongoma ayiqondakali kwaye mhlawumbi inokugutyungelwa yi-Apple ngohlaziyo oluthile lwenguqulo yenkqubo yokusebenza ye-iOS.
I-Apple ngaphambili yayinqamleza amanqaku athile e-iPhone kwizixhobo zakutshanje.
Nge-Animoji, umzekelo, ikhamera entsha ye-TrueDepth iyimfuneko ukubamba intshukumo yakho yobuso, nangona umsebenzi we-Animoji ubunokumiliselwa ngekhamera yangaphambili efanayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Umda we-Apple wokuKhanya kweMifanekiso
URaul G sitsho
Ndiyakholelwa ukuba uxhasa iApple kuphela njenge fanboy, njengoko kunokwenzeka ukuba ukuba i-iPhone 7 Plus inokufikelela kwiifoto ezinzulu ayinakuba nezinye iziphumo eziveliswa yisoftware, kubonakala kum ngathi iApple iyilinganisile ngentengiso kwaye ngoba ukubeka iinzame zabo kwi-iPhone X, ukongeza kuphela izinto ezongezelelweyo kwi-iPhone 8 (i-iPhone 7s) isoftware nje hayi izixhobo ezininzi. Masithembeke ngokuhamba kuka-Apple, yinto oyibonayo ukusuka kwi-iPhone 4 ukuya phezulu.
Phendula uRaul G
UFoxconn waphinda wanyanzeliswa kwimeko yokuxhaphaza abantu